www.camaloow.com - News: Al Shabaab Oo Weerar Ku Qaaday Diyaarad Dagaal oo ay leedaha dalka..............................
December 10 2018 04:03:26
Al Shabaab Oo Weerar Ku Qaaday Diyaarad Dagaal oo ay leedaha dalka..............................
<?php </a> Sida uu qoray Wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya diyaarad dagaal oo ay lahayeen ciidamada Booliska Kenya ayaa waxyeelo ay ka soo gaartay rasaas ay ku fureen dagaalyahanno ka tirsan Al Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka ammaanka Kenya ayaa u sheegay wargeyska in diyaaradani nuuceedu yahay MI 17 ay haleeshay rasaas ay ku fureen dagaalyahanno ay rumaysanyihiin in ay ka tirsanaayeen Al Shabaab.
Diyaaradan ayaa xilligii la tooganayay howlgal ka dhan ah Al Shabaab ka waday Keymaha gobol Xeebaadka Lamu ee dalka Kenya, halkaas oo ay xoogan yihiin Al Shabaab.
Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in rasaastaasi diyaaradu ay ka haleeshay Matoorka, taas oo keentay in duuliyiihii waday uu si dhaqsi ah ugu dajiyo Xero lagu magacaabo Basuba oo aan sidaasi uga fogeyn goobtaasi lagu weeraray.
Ma jirto wax waxyeelo ah oo soo gaaray duuliyihii iyo caawiyeyaashii la socday diyaaradaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka Kenya Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ayaa gaaray halkaasi waxa ayna ka bilaabeen howlgal ka dhan ah Al Shabaab.
Weerarkan ayaa ka dhacay meel 5 KM kaliya u jirta halka todobaadkii hore qarax Miino lagula eegtay Ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Kenya.
· salaad on September 03 2018 · 0 Comments · 44487 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 28,900,847 unique visits